Shiinaha Waa maxay Qaybaha Warshada Mootada Korontada ah iyo alaab-qeybiyeyaasha |Kooxda Huaihai Holding Group
Mootooyinka laadadka korantada ayaa noqonaya gaadiid aad u caan ah oo aan ahayn carruurta iyo dhalinyarada oo keliya balse sidoo kale dadka waaweyn.Haddi aad aadayso dugsi, shaqo, ama aad dhex wareegayso magaalada, waxa muhiim ah in mooto-gacmeedkaagu si fiican loo ilaaliyo, si fiican loo saliiday, oo nadiif ah.
Mararka qaarkood marka mootadu jabto, beddelka qaybo ka mid ah oo la hagaajiyo ayaa ka qaalisan iibsashada mid cusub markaa mar walba waa lagama maarmaan inaad daryeesho mootadaada.
Laakiin si aad si habboon u ilaaliso oo aad u daryeesho mootooyinkaaga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaybaha qalabkaagu ka samaysan yahay iyo qaybahan la bedeli karo, si fudud u dami kara, si fududna u jabi kara.
Halkan waxaanu ku siin doonaa fikrad ah waxa uu ka samaysan yahay mootada laadkaaga caadiga ah.
Qaybaha mootada laad.Liistada soo socotaa waa mid hore ilaa hoose ka dibna hore ilaa gadaal.
Hore (laga bilaabo T-bar ilaa giraangiraha hore)
Qabashada gacanta - tani waa labo qalab oo jilicsan sida xumbo ama caag halkaas oo aan ku hayno biraha gacmahayaga.Kuwani badanaa waa la dumin karaa oo si fudud ayaa loo beddeli karaa.
Lifaaqa qabsiga gacanta iyo suunka qaadida - laga helay midigta hoose ee isgoyska T, tani waxay u adeegtay sidii isku dhejis iyo halka cidhifka suunka qaadida uu ku dheggan yahay.
Xajin degdeg ah oo loogu talagalay dhererka tiirka isteerinka - waxay u adeegtay sidii xajin xajinaysa dhererka marka la hagaajiyo.Marka mishiinku leeyahay dherer la hagaajin karo, xajintu waxay xakamaysaa oo xidhaa dhererka.
biinka qufulka dhererka tiirarka isteerinka – biin xira joogga marka T-bar la hagaajiyo.
Isku dhejinta - waxay haysaa tiirka isteerinka iyo hoyga dhegaha lagu xidho.
Qalabka dhegaha lagu xidho – xadhkahani waa kuwo qarsoon oo xakameeya sida isteerinku u siman yahay.Xadhkahaan la'aanteed, mishiinka lama wadi karo.
Ka joojinta hore - waxaa la helay isagoo ku qarsoon fargeetada oo u adeegay sida ganaaxa giraangiraha hore.
Dheefta hore/ dhoobada - waxay ka ilaalisaa qofka fuushanaya inuu ku qubeeyo dhoobada iyo wasakhda.
Fargeeto - waxa uu hayaa taayirrada hore waxaana maamula xadhkaha dhegaha.Caadi ahaan waxaa laga sameeyaa bir daawaha ah ama aluminium heerka diyaaradeed.
Taayirrada hore - mid ka mid ah labada taayir waxaana badanaa laga sameeyaa poliurethane (oo loogu talagalay mootada laad caadiga ah).Mootooyinka wadada ka baxsan, tani waxay ka samaysan tahay caag pneumatic ah.Waxay leedahay saameyn gudaha taas oo inta badan ah Abec-7 ama Abec-9.
Tuubada madaxa - qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah qalabka isku xira sagxada iyo nidaamka isteerinka iyo T-bar.Tan waxaa badanaa lagu dhex daraa habka laalaabida waxaana inta badan laga sameeyaa daawaha birta ah ama aluminium heer sare ah.Mootooyinka stunt, kani inta badan waa mid go'an oo la alxamaa labada sagxadeed iyo tiirka isteerinka.
Dusha sareiyo qaybta danbe
Deck - madal xajinaysa miisaanka qofka fuushanaya.Tani waxay badanaa ka sameysan tahay daawaha ama aluminium waxayna leedahay meel ka hortag ah.Sagxaddu waxay ku kala duwan tahay ballaca iyo dhererka.Mootooyinka stunt waxay leeyihiin sagxadaha dhuuban halka mootooyinka laadadka caadiga ah ay leeyihiin sagxad ballaadhan.
Kickstand – istaag ku haya qalabka oo dhan meel taagan marka aan la isticmaalin.Waa la soo rogi karaa/lalaabmi karaa waxaana gacanta ku haya il la mid ah kan baaskiillada iyo dhinaca taagan ee mootada.
Gadaasha dambe iyo biriiga - oo la mid ah xayndaabka hore, dabada dambe iyo dhoobada ayaa ka ilaalinaysa qofka fuushanaya wasakh qubaysiga laakiin sidoo kale waxa uu ku xidhan yahay nidaamka baabuurka.Raaduhu wuxuu u baahan yahay inuu tan cagtiisa ku cadaadiyo si qalabku u istaago.
Gawaarida dambe - waxay la mid tahay taayirrada hore oo kaliya oo ay ku xiran tahay qaybta dambe ee mashiinka.
Maxaad ugu baahan tahay inaad ogaato qaybaha mootooyinkaaga?
Sida ay yiraahdaan, qofku ma hagaajin karo wax uusan ogeyn.Ogaanshaha qaybaha kor ku xusan waxay ku siinaysaa awood aad ku falanqayso sida qaybahani u shaqeeyaan iyo sida mid kastaaba u saameyn karo safarkaaga maalinlaha ah.Marka mid ka mid ah qaybahan ay xumaato, way fududahay in la aqoonsado dhibaatada oo laga dalbado alaabada cusub ee kaydka haddii aad taqaano waxa lagu magacaabo.Kuwo kale oo aan midna garanaynin ayaa kaliya ka saaraya qaybta dhaawacan oo keeni doonta bakhaarka.Tani waa dhaqan wanaagsan laakiin ka waran haddii aad internetka ka dalbaneyso oo aadan aqoon magaca iyo waxyaabaha gaarka ah?TheAqoon dheeraad ah oo aad leedahay, inta badan dhibaatooyinka aad xallin karto.
Sidee loo daryeelaa mootooyinkaaga si loo yareeyo waxyeelada iyo xirashada iyo jeexashada?
Sida aad horeba u ogtahay, dayactirku waa qaali sidaa daraadeed waxaanu ku siin doonaa hagitaan ku saabsan sidaad isaga ilaalin lahayd bixinta kharashaadka badan ee dayactirka iyo dayactirka.
Si sax ah u fuul.Kaxaynta saxda ah waxay ka dhigan tahay inaadan u isticmaalin qalabkaaga maalinlaha ah ee socodka iyo laadadka xorta ah.Haddii qalabkaaga loogu talagalay safarka maalinlaha ah, u isticmaal sidii loogu talagalay in lagu isticmaalo.
Ka fogow godadka, laamiyada qalafsan, iyo waddooyinka aan laamiga ahayn.Had iyo jeer hel meel siman oo mashiinkaagu si habsami leh ugu socon karo iyada oo aan wax gariir ah lahayn.Inkasta oo ay leedahay ka joojinta hore, ma sii jiri doonto haddi aad had iyo jeer ku riixdo qalabkaaga xadkiisa.
Ha uga tagin safarkaaga bannaanka adigoo soo bandhigaya qorraxda ama roobka.Kulaylka qorraxdu wuxuu dhaawici karaa rinjigiisa wuxuuna saameyn karaa xajmigiisa halka roobka uu wax walba u rogi karo miridhku haddii uu ka samaysan yahay bir daawaha ah.
Ha fuulin xilliga jiilaalka ama cimilada xun.
Had iyo jeer nadiifi qalabkaaga oo ha engegin marka aan la isticmaalin
Dayactirka mootada waa qaali oo qaybo ka mid ah mararka qaarkood way adag tahay in la helo gaar ahaan moodooyinka hore.Sidaa darteed, haddii aad rabto in mashiinkaagu uu sii dheeraado, ogow wax walba oo ku saabsan oo raac isticmaalka habboon iyo dayactirka.
Waqtiga boostada: Mar-19-2022